Ihe oru 3 na RGB Led na Arduino maka ọkwa niile | Akụrụngwa n'efu
Otu n’ime ọrụ izizi nke onye ọrụ malitere n’ụwa nke ihe elektrọniks na-amụta na-arụ ọrụ na ọkụ yana ọkachasị na ndị LED. Usoro mmụta nke ihe a dị mfe ma na nkeji nkeji anyị nwere ike ị nweta nnukwu ihe dịka oriọna dị mma, akara ngosi ma ọ bụ ihe nkwenye nke nnukwu ọrụ.
Agbanyeghị, n'oge na-adịbeghị anya, ndị ọrụ na-amụta otu esi eji ndị RGB LED, mgbanwe dị iche iche wee bụrụ ihe ama ama ma bara ezigbo uru maka ọtụtụ ọrụ. Ma Kedu ihe ọ bụ? Kedu ọrụ ndị kachasị ewu ewu anyị nwere ike iji ihe ọhụụ ọhụrụ RGB Led kee?
1 Kedu ihe bụ RGB Led?
2 Enweghi ngwụcha Led RGB Cube
3 Mfe Ikanam RGB Banye
4 Dugara RGB Pixel Touch Isiokwu
5 Kedu oru kwesiri ekwesi?
Kedu ihe bụ RGB Led?
Ikanam bụ ọkụ na-enye ọkụ. Ngwa dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji ngwaọrụ ọ bụla nwere kọmputa ọbụlagodi na enweghị ya. Ọrụ ya bụ ike dị ala ọ na-ere na ụdị dị iche iche anyị na-ahụ na ọkụ. Yabụ, n'adịghị ka bulbs ọdịnala ndị na-enye anyị ìhè, Ọkụ na-enye anyị ohere iji ha na ngwaọrụ dị iche iche wee mepụta ụdị ndị ọzọ dị anya na ụdị bọlbụ ọdịnala. Oge ndị bara uru nke LED dị elu karịa ngwaọrụ ndị ọzọ. Ya mere, dị ka bọlbụ ọkụ, diode nke ụdị a na-enye ọtụtụ awa nke ọkụ karịa ọkụ ọkụ ọdịnala; Dịka akụkụ nke ihuenyo, pikselụ LED na-enye ndụ karịa pikselụ nkịtị; Ya mere na ngwaọrụ dị iche iche na-eji teknụzụ.
Mana na nke a, anyị ga-ekwu maka ọkụ RGB, ọkụ na-ewu ewu. Ihe kpatara ihe ịga nke ọma a bụ n'ihi ohere ha na-enye karịa ọkụ nkịtị. Otu diode LED na-enye naanị otu agba nke ọkụ, ihe anyị na-enweghị ike ịgbanwe na ngwaọrụ belụsọ ma anyị gbanwere diode ahụ. Ihe RGB Led diode na-enye ọkụ na agba atọ: Red (Red), Green (Green) na Blue (Blue) na njikọta ha, nke ahụ bụ, ọ nwere ike ịgbanwe agba na mmasị anyị na-enweghị ịgbanwe diode. Ihe ịga nke ọma nke ọkụ RGB LED dị na ohere ịgbanwe agba nke ọkụ na-enweghị ịgbanwe diode, ihe dị oke mkpa nke naanị ihe ọmụma mmemme chọrọ.
Enweghi ngwụcha Led RGB Cube
Ihe oru ngo a bu imeputa otu agba nke nwere ike igbanwe dika oge anyi nwere ma obu na obere nkeji ole na ole. Enweghi ngwụcha Led RGB Cube bụ obere ọkụ, nke nwere ike ịrụ ọrụ dị ka oriọna diode. Nsonaazụ ikpeazụ ga-abụ nchikota nke rgb led diode na Arduino.
Maka owuwu ya ị chọrọ 512 RGB Led diodes, 6 kristal, a microcontroller nke nwere ike ịbụ Arduino UNO, eriri ma ọ bụ batrị iji rụọ ọrụ diodes na isi nke na-akwado usoro ahụ dum. Ozugbo anyị nwere nke a, anyị ga-ejikọ diodes niile ka ha wee mepụta cube ma ọ bụ nwee ụdị cube. Ihe nzuzo iji wuo ihe owuwu a bu ihua otu pin nke diode nke di na diode, meputa uzo ziri ezi na ntunye nke ozo. A ga-enwe otu akụkụ nke cube nke na-enweghị njikọ ọ bụla na ibe ha, mana ha niile ga-arapara n'otu diode RGB.
Ozugbo anyi mechara ihe nile, anyị ga-esonye ntụtụ ndị fọdụrụ na bọọdụ microcontroller. N'oge a, anyị ga-arụtụ aka na akụkụ nke cube a ga-enwer 8 diodes, na -emepụta cube nke 8 x 8 x 8 RGB LED. Yabụ, anyị na-esonye na pin nke diodes ndị a na - agbasaghị site na cube gaa na bọọdụ ma webata mmemme maka ya nke na - agbanye diode cube nke nta nke nta yana agba dị iche iche. Ozugbo a gbakọtara ihe niile, anyị ga-eji kristal mepụta ụdị ụfụ nke na-echekwa ma na-ekpuchi diodes ahụ, ntọala ahụ ga-akwado ọ bụghị naanị diode cube kamakwa ụfụ nke anyị kere. Ihe owuwu nke Infinity Led RGB Cube dị mfe mana ọ dị mfe nhazi ya. N'agbanyeghị, na Ozizi Ga-ahụ a nzọụkwụ-site-zoo ndu ya na-ewu.
Mee MIDI gi na Arduino
Mfe Ikanam RGB Banye
Ihe oru ngo a mara nke oma ma baa uru karie oru kariri nke gara aga. Mfe Ikanam RGB ịrịba ama bụ ihe ọmụma ịrịba ama wuru na diodes na Arduino. Ihe oru ngo a chọrọ 510 RGB LED ma ọ bụ na anyị nwere ike ịgbanwe nke a maka ibe nke otu ụdị. Echiche bụ iwu rektrik nke 10 x 51 LEDs. Anyị ga-achọkwa akwụkwọ 3 acrylic ga-arụ ọrụ dị ka nkwado na nchekwa maka Easy LED RGB Sign nke anyị mepụtara. 510 RGB LEDs, cables ime wiring, a microcontroller board dị ka Arduino UNO na batrị iji rụọ ọrụ diode ahụ na bọọdụ Arduino.
Nke mbụ, anyị ga-emepụta ihe owuwu ahụ ma tinye diodes na ya. Anyị nwere ike ime dịka anyị chọrọ mana ezigbo aghụghọ bụ iji otu n'ime mpempe akwụkwọ ndị ahụ dị ka nkwado maka ọkụ ọkụ, ebe ọ bụ na ọ bụ transperent, a gaghị enwe ekele maka nsonaazụ ikpeazụ. Site na eriri dị mkpa anyị ga-agbakwunye diodes ma jikọọ ha na microcontroller. Ozugbo etinyere ihe niile, anyị na-ejikọta microcontroller na batrị na n’ime ya anyị webatara mmemme anyị chọrọ. Usoro ihe omume ahụ ga-arụ ọrụ ndị a:
Gbanye ụfọdụ ọkụ.
Nke ọ bụla n’ime diode a ga-enwe ụcha ụfọdụ.
Ihe ga-esi na ya pụta bụ ịmepụta mkpụrụedemede, akara ma ọ bụ akara ngosi nke anyị nwere ike iji n'ọnọdụ ụfọdụ. Mfe LED RGB Sign bụ ihe na-atọ ụtọ na-adọrọ mmasị ebe ọ bụ na ọ bara ezigbo uru, ebe ọ bụ na ọ na-enye anyị ohere ịmepụta akara ngosi ndị na-enye ìhè anyị chọrọ. Anyị nwere ozi ndị ọzọ gbasara owuwu ya na ebe nchekwa ihe. Mana ọ bụghị ọrụ emechiri emechi na Anyị nwere ike ịdị iche na ọnụ ọgụgụ nke ndị diodes ma ọ bụ ozugbo gbanwee ihe omume ahụ na-eme ka ìhè nke diodes wee rụọ ọrụ dị iche. Ike na-abawanye mgbe anyị jikọtara akara ngosi RGB LED na Arduino, na-enwe ike ịmepụta akara ngosi mara mma ma ọ bụ na njikọ na kọmputa dị ka akara aka ọkachamara.
Dugara RGB Pixel Touch Isiokwu
Isiokwu RGB Pixel Touch Isiokwu bụ ihe ọ funụ na-atọ ụtọ nke na-eme ka diodes ghọọ tebụl egwuregwu dị mfe. Ihe oru ngo a siri ike karie oru ndi gara aga mana iwu ya di mfe. N'okwu a, anyị ga - agbakọta karịa RGB na Arduino LEDs, ebe ọ bụ na anyị ga - ejikwa ihe mmetụta emetụ ma ọ bụ sensọ IR. Maka nke a, anyị ga-achọ ihe ndị a:
Tebụl nwere mpempe akwụkwọ.
A matriks nke 10 x 16 RGB LED.
Otu usoro nke 10 x 16 IR mmetụta sensọ.
Kaadị SD ma ọ bụ MicroSD iji chekwaa data.
Ọkà okwu nwere amamịghe nwere njikọ Bluetooth.
Na nke a anyị kwesịrị ịmepụta ọnụ ma ọ bụ "igodo" nke na-etolite nkwụsị nke ihe mmetụta mmetụta na diode na nke ahụ ga-abụ njikwa anyị ga-pịa mgbe anyị na tebụl anyị na-egwuri egwu. N'ụzọ dị otú ahụ na ọnụ ọ bụla nwere ike ịpụta ozi ma ọ bụrụ na anyị emetụ panel ahụ aka ma ọ nwere ike ịnye ọkụ. A) Ee, Anyị nwere ike igwu egwu na tebụl a, egwuregwu ebe nchekwa, agwọ a ma ama, ping-pong ma ọ bụ mepụta tebụl dị mfe. Na mkpokọta anyị ga-enwe ọnụ ọgụgụ 160 anyị nwere ike idowe n'ụdị matriks 10 x 16.
Anyị ga-edebe matrik a n'okpuru iko tebụl. A ghaghị dochie iko nke okpokoro site na nro dị nro dịka acrylic plastic. A na-eme ya ka na ihe mmetụta na-arụ ọrụ mgbe anyị pịa ya.
Ugbu a, gbakọtara ihe niile, anyị ga-emepụta mmemme na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ na matrik a. Anyị nwere ike iji egwuregwu dị ka tetris ma ọ bụ nanị kpochapụwo egwuregwu nke "Simon". Anyị na-etinye ya n'ime bọọdụ microcontroller ma anyị jikọọ ya na matrik ahụ. Anyị nwere ike tinye uda na oru a n’ihi igwe okwu Bluetooth nke anyi nwere ike ijikọ na ihe mmetụta Bluetooth nke nwere bọọdụ microcontroller.
Nke a bụ nchịkọta nke Led RGB Pixel Touch Table project ma ntuziaka ya adịghị mfe dịka o yiri. Ihe e kere eke nke ọnụ chọrọ atụmatụ na okike nke obere ọnụ, yana sọftụwia egwuregwu otu ihe ahụ na-eme. N'ebe a, anyị chọrọ ikwu maka isi echiche na ihe nwere ike ịpụta. Ma i nwere zuru ezu ndu ya ewu na njikọ a.
Kedu oru kwesiri ekwesi?
Anyị ekwuola maka ọrụ atọ nwere RGB LEDs ndị dị mfe iji wuo ma dị ọnụ ala. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n’ime unu ahụla na anyị na-eji nnukwu diodes eme ihe, anyị ga-ekwu na ọnụahịa nke ndị ọhụrụ a dị oke ala, nke mere na obere diodes dị otú ahụ nwere naanị ọnụ ego euro abụọ. All oru ngo nwere ha peculiarities na arịrịọ ha. Onwe ya Ekwadoro m ime oru niile. Nke mbụ ọ ga-arụ ụlọ ọrụ ọkụ; emesia o gha ewuru akara ngosi a ma emesia o gha ewuru table egwuregwu. Usoro nke mmecha dị mkpa ka anyị si na ọrụ dị mfe banye na ọrụ siri ike karị. N'ọnọdụ ọ bụla, mgbe emechara ọrụ atọ a, nsonaazụ ya ga-abụ otu: anyị ga-achịkwa ojiji nke diodes ndị a. Na gị Kedu oru ị kacha amasị gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Ọrụ 3 na RGB Led na Arduino